By Sarah Lovan, Arleta Little
Waxaan warqaddan furan u dirnay deeq-bixiyeyaashayada farshaxanka iyo shuraakeyaasha kale ee qiimeeya Abriil 17, 2020, si wax looga qabto saameynta coronavirus-ka cusub. Booqo boggan si aad ugu cusbooneysiiso ilaha Covid-19 ee faa'iido-darrooyinka iyo ogeysiisyada la xiriira jawaabta McKnight ee fayraska.
Gacaliyeyaal deeq-bixiyeyaasha Farshaxanka McKnight, wada-hawlgalayaasha, iyo bulshada:
In kasta oo aan si toos ah ula xiriirnay qaar badan oo idinka mid ah, waxaan ku siinnaa warqaddan furitaan ahaan kooban iyo casriyeyn dheeri ah oo ku saabsan dadaalkeenna ugu wanaagsan ee aan uga jawaab celin doonno oo aan kaa taageeri karno dhibaatooyinka ay sababay noro-coronavirus / Covid-19.
Mu'asasada ayaa soo saartay sedex bilood oo dheeri ah oo ku saabsan warbixinada deeqda, waxaanan dhamaanteen ku dadaalnaa inaan sare u qaadno dabacsanaanta deeq-bixiyahaaga oo aan u siinno deeq-bixiyeyaasha deeq-bixiyeyaasha. Kooxda Farshaxanka, waxaan la qabsaneynaa si aan ula kulanno baahiyaha farshaxan yaqaanayaasha.
"Tani waa daqiiqad gacanta lagu hayo oo wax ka beddeli doonta aragtideena mustaqbalka."
Waxaan ognahay in farshaxan yahano badan iyo ururo farshaxan inay la daala dhacayaan daqliga iyo dakhliga sababta oo ah baajinta riwaayadaha, casharada, iyo munaasabadaha. Jawaabta:
McKnight wuxuu gacan ka geysan doonaa $50,000 ilaa Xilliga guga ee Farshaxanka 'Sanduuqa Gargaarka Degdegga ah ee Shaqsiyeed ee la ballaariyey, oo siiya taageero toos ah farshaxan yaasha.
Waxaan bixinaa hal sano kordhinta deeqda deeq-bixiyeyaasha farshaxanka ee hadda jira ee u cusboonaysiinta cusboonaysiinta maalgalinta 2020.
Waxaan dhiiri gelinay McKnight Artist Fellowships iyo Golaha Fanka ee Gobolka la-hawlgalayaasha si ay ula qabsan karaan mashruuca iyo maalgelinta horumarinta xirfadeed ee loogu talagalay fanaaniinta, iyo sidoo kale soo sheegida waqtiga loo qabtay iyo shuruudaha.
Si loo hubiyo in barnaamijyadeena Farshaxanada farshaxanka 2020 ee McKnight ay sii wadaan abaalmarinta iyada oo aan la carqaladeynin, waxaan u wareejinay dhammaan bahda isbahaysiga gu'ga mashiinno casri ah, waxaanan ku dhiirigeliney jaalayaasheena iskaashiga inay u soo kabtaan maalgalinta safarka ee loo qorsheeyay si loo xoojiyo loona xoojiyo kaabayaasha IT-ga, sida loogu baahdo.
Waxaan kale oo aan baaraynaa dariiqooyin kale oo aan uga caawin karno yareynta guryaha muddada-dheer iyo dhibaatooyinka shaqo ee ay kala kulmaan fanaaniinta iyo ururada fanka ee Minnesota iyo wixii ka dambeeya.
Sababta oo ah Covid-19, Xarunta buugta akhriska qoraalka ah wuxuu ku socday si toos ah barnaamijka '#WordPlay', oo ah riwaayad buugaagta onlaynka ah.
Markii laga jawaabayo viruska, Masraxa Mu waxay marti galineysaa aqriska miiska sawirka bilaashka ah iyo qol-qolka tooska ah oo ay la socdaan farshaxan yaasha iyo taageerayaasha fanka.
Ururka Guryaha Bulshada ee Hindida Mareykanka si dhakhso leh u bilaabay a dukaanka khadka tooska ah si loo hubiyo in fanaaniinta asaliga ah iyo ganacsatada ay sii wadi karaan iibinta alaabahooda inta lagu jiro cudurka faafa.
Ku Faaidaysi la'aanta sinnaan la'aanta ka dhex jirta Bulshadeena iyo Qeybta Fanka
Qeybta farshaxanka iyo dhaqanka ayaa ka tarjumeysa, siyaabo badanna ay u weyneyneysaa, sinnaan la’aanta ka jirta bulshadeena guud ahaan, iyo fayrasku wuxuu keenayaa xasillooni la'aan farqiga iyo sinnaan la'aanta ka jirta qaybteena. Fahmitaankaan, waxaan sidoo kale dooneynay inaan bixinno jawaab celin muddo-gaaban taasoo istiraatiijiyad ahaan ku hormarineysa ballanqaadkeenna muddada fog ee aan u kordhineyno sinnaanta jinsiyadda iyo dhisidda awoodda iyo awoodda loogu talo galay fanaaniinta tabar daran iyo ururada fanka - gaar ahaan kuwa u adeego oo ay hogaamiyaan cunsuriyadda. iyo bulshooyinka dhaqan ahaan kaladuwan. Si loo sii hormariyo shaqadan muhiimka ah ee waqtigan:
Waxaan ku biirin doonaa $50,000 the Machadka Dhaqanka ee Cilmi-nafsiga iyadoo la taageerayo sanduuqa gargaarka degdegga ah ee gaar ahaan loogu talagalay Madowga, Dhaladka iyo Asaliga, Latinx, iyo farshaxannada Hawaiian.
"Waxaa naga go'an in aan taageerno fanaaniinta iyo ururada farshaxanka kuwaas oo abuuraya noocyada bulshooyinka aan rabno in aan ku noolaano."
Press House waxay bilaabeen mashruuca qorayaasha ee loo yaqaan "House House Writrs Project" si ay ugu hawlgalaan asalka, shaqooyin gaagaaban oo ka socda farshaxan yahano dakhli ku lumay Covid-19.
TU qoobka waxay siineysaa fasalo qoob ka ciyaarka khadka tooska ah fanaaniintooda wax barista ilaa Juun 12.
Fasalada tooska ah ilaa laylisyada maskaxda lagu hayo, Meelaha Matxafka Farshaxanka ayaa la wadaagaya barnaamijyada virect iyo kheyraadka loogu talagalay da 'walba.
Kani waa daqiiqad gacmaha isqabsasha ah oo beddelaysa himiladeenna mustaqbalka. Barnaamijka Farshaxanka ee McKnight wuxuu sii wadaa inuu ka shaqeeyo isbaheysiga iyo inuu taageero dadaallada waxqabadka ee gudaha iyo guud ahaan arrimaha aasaasiga ah ee aasaasiga ah - iyadoo lala kaashanayo maalgeliyeyaasha dadweynaha iyo ururada u doodista, iyo iskaashiga aan la leenahay asxaabteenna samafalka ah. Anaga iyo kooxdeena Midwest Cimilada & Tamarta iyo asxaabta kale, waxaan taageernaa ka mid noqoshada fanaaniinta iyo shaqaalaha riwaayadaha ee u doodista gobolka iyo dadaallada dhisidda dhaqdhaqaaqa ee ay hormoodka ka yihiin MNCovidResponse.com iyo Tallaabo Ka Qaado Minnesota. Waxaan ku firfircoon nahay gudaha isbahaysiga hal-abuurka Minnesota, koox ka kooban 20+ deeq-bixiyeyaasha fanka iyo kuwa gaarka loo leeyahay iyo ururo aan-macaash lahayn Muwaadiniinta Minnesota ee Farshaxanka si loo wadaago macluumaadka iyo ilaha gobolka oo dhan. Waxaan sidoo kale ku dhawaaqayaa wacitaanka ay sameeyeen asxaabteena Bixiyeyaasha Farshaxanka si loo dhiso adkeysiga qoto-dheer ee maalgelinta farshaxanka qaran ahaan.
Grace Lee Boggs waxay tiri “dadka ku tababaranaya hal abuurkooda markay baaba'ayaan waa midda ugu weyn ee taariikhi ah ee aadanaha. Fannaaniinta iyo ururada farshaxanka ayaa muhiim u ah sida aan isku fahamno annagoo ah reer Minnesota. Tani waa sababta McKnight Foundation ay maalgashi qoto dheer ugu sameysay qaybta farshaxanka ee Minnesota ku dhawaad 40 sano, waana sababtaas, inta lagu guda jiro qalalaasahan, waxaa naga go'an inaan taageerno fanaaniinta iyo ururada farshaxanka kuwaasoo abuuraya noocyada bulshooyinka aan rabno inaan ku nool.
Qalbiyadeenna oo dhan,
Arleta Little, sarkaalka barnaamijka iyo agaasimaha farshaxanka
Sarah Lovan, sarkaalka barnaamijka